Suxufiyiintii ku geeriyooday qaraxii hotel jazeera oo aas loo sameeyey – STAR FM SOMALIA
Suxufiyiintii ku geeriyooday qaraxii hotel jazeera oo aas loo sameeyey
Masuuliyiinta Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa maanta si wadajir ah kala qeyb qaatay bahda warfidiyeenka Soomaaliyeed iyo Telefishinka Universal aaska labo weriye oo u kala shaqeynayay telefishinka universal iyo Idaacadda SBC kuwaasoo ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ayaa cambaareeyay falka naxariis darada ee lagu dilay Marxuum Maxamed Cabdikarim Macalim oo u shaqeynayay telefishinka Universal iyo Cabdixakim Maxamed Cumar oo ku geeriyooday qarax bambaano oo shalay ka dhacay banaanka Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho, halka weriye Salmaan Saciid uu dhaawac wejiga iyo gacanta bidix ka soo gaaray, haatana lagu dabiibayo isbitalka Madiina ee Muqdisho.
Marxuum Maxamed Cabdikarim ayaa Muqdisho ku sugnaa muddo todobaad ah, sida uu noo xaqiijiyay Agaasimaha Bariga Africa ee Telefishinka Universal, Cabdullahi Xersi, waxaana marka shilku ku dhacay isaga iyo Salmaan Saciid ay garoonka ka dooneen weriye Cabdixakiim Maxamed Cumar oo markii ay garoonka ka soo laabtay masiibada kula dhacday markii ay marayeen agagaarka hotelka Jazeera.
Marxuum Cabdixakiim Maxamed Cumar ayaa meydkiisa la helay habeenimadii Axadda abaaro 9:30fiidnimo, kolkaas oo markii ay suxufiyiin Soomaaliyeed ku soo wargeliyeen Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ay dadaalo badan kadib suurogashay in meydka goobta laga qaado oo la geeyo isbitalka.
Xoghayaha Guud ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed, Md. Maxamed Ibrahim oo aaska kala qeyb galay suxufiyiin tiro badan oo ka dhacayay qabuuraha dugsiga Tababarka ee Gen. Kaahiye ayaa ku tilmaamay falkaasi lagu dilay labadaasi weriye mid arxan darro ah, uguna baaqay suxufiyiinta inay feejignaan dheeri ah muujiyaan.
“Inaa Lilaahi wa inaa Ilaahi Raajicuun, waa geeri xanuun badan, walaalaheen keliya kama bixin qoysaskooda ee waxa ay ka baxeen dhamaan bahda warfidiyeenka Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Xoghayaha Guud ee NUSOJ Md. Maxamed Ibrahim, isagoo intaa ku daray in suxufiyiintu feejignaan dheeri ah muujiyaan, Allena uga baryay kuwa geeriyoodayna in uu naxariistiisa siiyo, midka dhaawaca ahna Alle deg deg u bogsiiyo.
Qarax gaari oo galabta ka dhacay Magaalada Muqdisho
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo shaaciyay in shir caalami ah bishan gudaheeda lagu qaban doono Muqdisho